समाचार – Ranga Pati
काठमाडौँ – समाजसेवी तथा सूचना प्रविधि अभियन्ता महावीर पुनले ऋणको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्। ऋण दिन बैंकले नपत्याएपछि पुनले सामाजिक संजाल मार्फत ऋणको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका हुन्। सामाजिक संजाल मार्फ पुनले आफूलाई २ वटा परियोजनाको लागि ३ करोड रुपैयाँ आवश्यक परेको तर नेपाली बैंकले नपत्याएको जानकारी गराएका छन्। आफूले अघि सारेका सामुदायिक पर्यटन […]
-रवीन्द्र श्रेष्ठ बर्लिनको पर्खालले जर्मनीलाई दुई देशमा विभाजन गरेको थियो । यसको निर्माणको शुरुवात १९६१ अगष्ट १३ (श्रावण २९, २०१८ विसं) वाट भएको थियो । यो पर्खाल पूर्वी जर्मनीको कम्युनिष्ट भनिएको सरकारले निर्माण गरेको थियो । दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर हिटलरको नेतृत्वमा रहेको जर्मनी माथि पूर्व तिरवाट सोभियत संघको लाल सेनाले आक्रमण तीब्र वनाएको थियो भने […]
सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) सगरमाथा अञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा बेतघारी गा.वि.स.मा जन्मिएका हुन्। बुवा बोगराज कट्टेल र आमा कमला कट्टेलको जेठो छोरोका रुपमा वि. सं २०४० साल आश्विन ४ गते उनको जन्म भएको हो ।[स्रोत नखुलेको] उनी ८ वर्षको छँदै उनको परिवार झापा झरेको थियो । माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सिताराम कट्टेलले झापाको गौरादहमा पुरा गरे । […]
विष्णु थापा गत मंसिर २३ गते सातदोबाटोस्थित पौडी पोखरीबाट निस्कँदै गर्दा गौरिका सिंहको गलामा पदकै पदक झुन्डिएका थिए। उनले हालै सकिएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा चार स्वर्ण, दुई रजत र तीन कांस्य पदक जितेकी थिइन्। सागमा आफूले जितेका सबै पदक भिरेर बाहिर निस्किएकी गौरिकाले भनेकी थिइन्, ‘मेडल साह्रै गह्रौं छ। यति धेरै पदक आउँछ […]
Posted on December 15, 2019 December 15, 2019 Author rangapati Comment(0)
विप्लव समूहका कार्यकर्ता प’क्राउ पर्ने क्रम जारी, गोरखाबाट जिल्ला इञ्चार्जसहित दुई जना प’क्राउ
गोरखा, २७ मंसिर । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका स्याङजा जिल्ला इन्चार्जसहित दुई जना प क्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले सदरमुकामको घ्याम्पेशाल चोकबाट बिहीवार राति उनीहरुलाई प क्राउ गरेको हो । प क्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका–२७ का ३३ वर्षीय गोकुल पराजुली र रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका–१ का ३२ वर्षीय जीवन क्षेत्री रहेको […]
जनताका छोरा छोरिको जनबादी बिबाह, नेताका छोरछोरिको हाई प्रोफाइल विवाह, जनार्दनकी छोरीको हाइप्रोफाइल विवाह
काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नी छोरी कविता शर्माको विवाह ललितपुरको एउटा सुविधासम्पन्न ब्याङ्केटमा गरिदिएका छन्। माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेता शर्माले शनिबार ललितपुरका सानेपा ९झम्सीखेल०स्थित हेरिटेज ब्याङ्केटमा छोरी कविता शर्माको विवाह गरिदिएका हुन्। विवाहमा नेकपाका दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्री, उच्च कर्मचारी, सुरक्षा निकायका […]
Posted on December 11, 2019 December 11, 2019 Author rangapati Comment(0)
किन बोलायो एक्कासी नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक !
मङि्सर २३, काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। नेकपाको स्थायी समितिको बैठक दुईदिनमै टुंग्याउनेगरी बोलाइएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले मंसिर २९ गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो। पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्ष वर्ष वितिसक्दा पनि एकीकृत संरचनाहरु सुशुप्त अवस्थामा […]
Posted on December 9, 2019 Author rangapati Comment(0)
रोल्पाका द्वन्दपिडित टुहुराहरुलाई बेल्जियमबाट प्रगतिशील आमाहरुको सहयोग
“हो, आमाबाबा गुमाएकाहरु टुहुरा हुन् तर कसैबाट आमाबाबाकै सेवा मिल्छ भने ति टुहुरा हुदैनन्” हामी यस्तै टुहुरा बिहिन समाज निर्माण अभियानमा छौ। हरेकखाले घटनाले निम्त्याउने टुहुराहरुको जिन्दगिमा भगवानरुपी आमाहरु भेटाउने महाअभियानमा जुटेका छौ। यो अभियान भलै नयाँ भने होइन। टुहुरो बिहिन समाज निर्माणमा जुटेका आमाहरुको प्रेरणाले अभियानमा जुट्न प्रेरित गरेको हो। आधा आकाश, आधा धर्ति […]
Posted on December 5, 2019 Author rangapati Comment(0)